Volkano lehibe indrindra eran-tany: toetra sy toerana | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 11/01/2022 10:00 | Haibolantany
Amin'ny ankapobeny, manodidina ny 20 ny volkano mavitrika mipoaka amin'ny andro iray amin'ny fotoana rehetra manerana izao tontolo izao. Midika izany fa tsy tranga miavaka araka ny fahitantsika azy ny fifidianana vaovao. Toy ny amin'ny tafio-drivotra, tselatra maherin'ny 1000 no milatsaka amin'ny faran'ny andro. ny volkano lehibe indrindra eran-tany Izy ireo no lehibe kokoa ny fipoahana sy ny habeny.
Ato amin'ity lahatsoratra ity isika dia hifantoka amin'ny filazana aminao ny toetra mampiavaka ny volkano lehibe indrindra eto an-tany.
1 Volkano lehibe indrindra eran-tany
1.1 Volkano Nevados Ojos del Salado
1.2 Volkano Mauna Loa
2 Volkano lehibe indrindra eran-tany: supervolcanoes
Araka ny fandaharan'asan'ny Smithsonian Global Volcanology Program, Misy volkano mavitrika 1356 XNUMX eo ho eo eran-tany, izay midika fa ny volkano mavitrika dia ireo izay mipoaka amin'izao fotoana izao, mampiseho famantarana misy hetsika (toy ny horohoron-tany na entona entona lehibe) na niaina volkano nipoaka, izany hoe tao anatin'ny 10.000 XNUMX taona farany.
Misy karazana volkano rehetra, fipoahana mipoaka be na kely kokoa, izay miankina amin'ny lafin-javatra maro ny heriny manimba. Misy volkano ety an-tany, misy vavahady maromaro, rano, ary isan-karazany ny fitambaran'ny jeografika, fa inona no volkano lehibe indrindra eran-tany?
Volkano Nevados Ojos del Salado
Eo amin'ny sisin-tanin'i Shily sy Arzantina, i Nevados Ojos del Salado no volkano avo indrindra eran-tany, saingy 2.000 metatra monja ambonin'ny fotony no misy azy. Miakatra hatramin'ny 6.879 metatra manamorona ny Andes izy io.
Ny hetsika farany voarakitra an-tsoratra dia tamin'ny 14 Novambra 1993, rehefa nisy tsanganana volondavenona miendrika etona sy entona solfarika hita nandritra ny adiny telo. Tamin'ny 16 Novambra, ny mpandinika avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fambolena Fiompiana sy ny Tobim-paritry ny Polisim-pirenena Maricunga, 30 kilometatra miala ny volkano, dia nahatsikaritra andry mitovy nefa tsy dia mafy loatra.
Volkano Mauna Loa
Ny tampon'ny volkano ampinga Mauna Loa dia 2.700 metatra ambany noho ny Ojos del Salado any Nevada., nefa efa ho avo 10 heny noho ny Andes izy io, satria miakatra efa ho 9 kilometatra ambonin’ny fanambanin’ny ranomasina. Amin'izany fomba izany, dia heverin'ny maro ho ny volkano mavitrika indrindra eran-tany. Ny tampon'izy io dia tapaka amin'ny vavan'i Mokuaweo, ilay vavahady tranainy indrindra sy lehibe indrindra 6 x 8 km.
Tsy hoe volkano ihany no heverina ho lehibe fa avo koa. Na dia misy volkano hafa ao amin'io tambajotran'ny volkano io ihany koa izay misy manodidina ny Nosy Hawaii, dia iray amin'ireo lehibe indrindra izy io. Ny haavon'ny ranomasina dia 4170 metatra eo ho eo. Ireo refy miaraka amin'ny surface sy ny sakany manao 80.000 kilaometatra toratelo ny fitambarany. Noho izany antony izany, io no volkano lehibe indrindra eto an-tany raha ny sakany sy ny habeny.
Malaza amin'ny maha volkano misy ampinga manana toetra mampiavaka azy. Misy tondra-drano avo kokoa hatrany izay nipoitra tamin'ny fipoahana volkano fahiny. Volkano heverina ho iray amin'ireo mavitrika indrindra eto an-tany izy io. Hatramin’ny niforonany, dia saika nisy fipoahana volkano tsy tapaka izy io, na dia tsy nahery vaika loatra aza. Amin'ny ankapobeny dia voaforon'ireo lava kokoa izy io ary manana ny fototry ny hetsika sy ny akaiky azy amin'ny mponina. Midika izany fa tafiditra ao anatin’ny tetikasa Volkano nandritra ny folo taona izy io, izay mahatonga azy io ho lohahevitry ny fikarohana mitohy. Noho ireo fanadihadiana ireo dia misy vaovao be momba izany.
Tendrombohitra Etna, any Catania, tanàna faharoa lehibe indrindra any Sisila, Italia, no volkano avo indrindra any Eoropa kaontinanta. Manodidina ny 3.357 XNUMX metatra ny haavony, ary araka ny filazan'ny Ivotoerana Nasionaly Italiana momba ny Géofizika sy Volkanôlôjia (INGV), Ny fipoahana nifanesy tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nampiakatra ny tampony 33 metatra tao anatin'ny fotoana fohy.
Taorian’ny fiatoana naharitra 20 andro, dia nipoaka indray ny Tendrombohitra Etna ny talata 21 septambra. Ny volkano dia tantanin'ny Programme Global Volcanology an'ny Smithsonian, iray amin'ireo volkano malaza indrindra eran'izao tontolo izao, fantatra amin'ny asan'ny volkano matetika, ny fipoahana goavana maro, ary ny habetsahan'ny lava avoakany.
Amin'ny haavo maherin'ny 3.300 metatra, Io no volkano avo indrindra sy midadasika indrindra any amin'ny kaontinanta eoropeanina, tendrombohitra avo indrindra any amin'ny lemaka Mediterane ary ny tendrombohitra avo indrindra any Italia any atsimon’ny Alpes. Tazana ny Ranomasina Ionianina any atsinanana, ny Reniranon’i Simito any andrefana sy atsimo, ary ny Reniranon’i Alcantara any avaratra.
Mirefy 1.600 35 kilometatra toradroa eo ho eo ilay volkano, mirefy 200 kilometatra eo ho eo ny savaivony avy any avaratra mianatsimo, 500 kilaometatra eo ho eo ny manodidina ary XNUMX kilometatra toradroa eo ho eo.
Mahatalanjona hatrany amin’ny haabon’ny ranomasina ka hatrany an-tampon’ny tendrombohitra ny fiovan’ny toerana sy ny toeram-ponenany, miaraka amin’ireo zava-mahatalanjona voajanahary. Izany rehetra izany no mampiavaka ity toerana ity ho an'ny mpandeha an-tongotra, mpaka sary, naturalista, volkanolojista, fahalalahana ara-panahy ary tia ny tany sy ny paradisa. Ny faritra atsinanan'i Sisila dia mampiseho karazan-tany maro isan-karazany, saingy amin'ny fomba fijery ara-jeolojika dia manome fahasamihafàna tsy mampino ihany koa izy io.
Volkano lehibe indrindra eran-tany: supervolcanoes
Ny supervolcano dia karazana volkano izay manana efi-trano magma dia arivo heny noho ny volkano mahazatra ary noho izany dia afaka mamoaka fipoahana lehibe indrindra sy manimba indrindra eto an-tany.
Tsy toy ny volkano nentim-paharazana, mazava ho azy fa tsy tendrombohitra izy ireo, fa fitahirizana magmà ambanin'ny tany, izay tsy misy afa-tsy fahaketrahana lehibe miendrika vavahady hita eny ambonin'ny tany.
Nisy dimampolo teo ho eo ny fipoahana volkano teo amin'ny tantaran'ny planetantsika, izay misy fiantraikany amin'ny faritra ara-jeografika midadasika. Toy izany no nitranga tamin’ny Tendrombohitra Tuba, izay nipoaka tany Sumatra, 74.000 XNUMX taona lasa izay. mamoaka lava 2.800 kilaometatra toratelo. Tsy izany anefa no farany, satria nitranga tany Nouvelle-Zélande tany amin’ny 26,000 XNUMX taona lasa teo ho eo izay.
Angamba ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny Yellowstone supervolcano, any Etazonia, izay ny kaldera dia niforona 640.000 taona lasa izay. andry lavenona hatramin'ny 30.000 metatra ny haavony izay nandrakotra vovoka ny Hoalan'i Meksika.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny volkano lehibe indrindra eran-tany sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Volkano lehibe indrindra eran-tany